यूहन्ना ६ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
६ यी कुराहरूपछि येशू गालील समुद्र अर्थात्‌ टाइबेरियस समुद्रपारि* जानुभयो। २ तर एउटा ठूलो भीड उहाँको पछि-पछि लागिरहेको थियो, किनकि उहाँले बिरामीहरूलाई निको पार्न चमत्कार गर्नुभएको तिनीहरूले देखेका थिए। ३ त्यसैले येशू एउटा डाँडामा उक्लनुभयो र आफ्ना चेलाहरूसित बस्नुभयो। ४ अब यहूदीहरूको निस्तार-चाड नजिकै थियो। ५ नजर उठाएर हेर्दा एउटा ठूलो भीड आफूकहाँ आउँदै गरेको देखेपछि, येशूले फिलिपलाई भन्नुभयो: “यिनीहरूलाई खुवाउन हामी रोटी कहाँ किनौं?” ६ तर तिनको परीक्षा गर्न उहाँले यसो भनिरहनुभएको थियो, किनकि अब आफूले के गर्न लागेको छु भनेर उहाँलाई थाह थियो। ७ फिलिपले उहाँलाई जवाफ दिए: “यिनीहरूलाई अलि-अलि मात्र खुवाउने हो भने पनि दुई सय दिनारको* रोटीले पुग्दैन।” ८ उहाँका चेलाहरूमध्ये एक जना, अन्द्रियास, जो सिमोन पत्रुसका भाइ थिए, तिनले उहाँलाई भने: ९ “यहाँ एक जना केटोसित जौका पाँच वटा रोटी र दुई वटा साना माछा छन्‌। तर यत्तिका मानिसहरूलाई यसले कसरी पुऱ्याउने?” १० येशूले भन्नुभयो: “मानिसहरूलाई खाना खान बसाओ।” त्यस ठाउँमा प्रशस्त घाँस थियो; त्यसैले मानिसहरू आरामसित बसे। तीमध्ये लगभग पाँच हजार पुरुष थिए। ११ त्यसपछि येशूले रोटी लिएर धन्यवाद चढाउनुभयो अनि खान बसेकाहरूलाई बाँड्नुभयो। त्यसैगरि साना माछाहरू पनि तिनीहरूले चाहेजति दिनुभयो। १२ जब तिनीहरू अघाए, तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो: “उब्रेका टुक्राटाक्री बटुल र केही पनि खेर नजाओस्।” १३ त्यसैले जौका पाँच वटा रोटी खानेहरूले उबारेका टुक्राटाक्री तिनीहरूले बटुले र बाह्र डालो भरे। १४ उहाँले गर्नुभएका चमत्कारहरू देखेपछि मानिसहरूले यसो भन्न थाले: “संसारमा आउनेवाला भविष्यवक्ता पक्कै पनि यिनी नै हुनुपर्छ।” १५ त्यसैले तिनीहरू आएर आफूलाई जबरजस्ती राजा बनाउन आँटेका छन्‌ भन्ने थाह पाएर येशू एक्लै फेरि डाँडातिर लाग्नुभयो। १६ साँझ परेपछि उहाँका चेलाहरू समुद्रतिर ओर्ले, १७ अनि डुङ्गा चढेर पारिपट्टि कफर्नहुमतिर गए। यतिबेलासम्ममा अँध्यारो भइसकेको थियो अनि अझैसम्म येशू तिनीहरूकहाँ आइसक्नुभएको थिएन। १८ साथै, बेस्सरी बतास चलिरहेकोले समुद्रमा छाल उठ्न थाल्यो। १९ तर डुङ्गा खियाएर लगभग पाँच-छ किलोमिटर* पर पुगिसकेपछि, तिनीहरूले येशूलाई समुद्रमाथि हिंड्दै डुङ्गा भएतिर आउँदै गर्नुभएको देखे अनि तिनीहरू डराए। २० तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मै हुँ, नडराओ!” २१ त्यसैले तिनीहरू उहाँलाई डुङ्गामा चढाउन तयार भए अनि केहीबेरमै डुङ्गा तिनीहरू जान खोजेतिरै पाखामा पुग्यो। २२ भोलिपल्ट समुद्रको पारिपट्टि उभिरहेको भीडले एउटा सानो डुङ्गाबाहेक अरू डुङ्गाहरू देखेन अनि तिनीहरूले येशू आफ्ना चेलाहरूसित डुङ्गा चढ्नुभएको रहेनछ तर उहाँका चेलाहरू मात्र गएका रहेछन्‌ भनी थाह पाए। २३ तब टाइबेरियसबाट केही डुङ्गाहरू त्यहाँ आइपुगे, जसको नजिकै प्रभुले धन्यवाद चढाएर तिनीहरूलाई रोटी खुवाउनुभएको थियो। २४ जब भीडले न येशूलाई न त उहाँका चेलाहरूलाई देख्यो, तब तिनीहरू येशूलाई खोज्न यी डुङ्गाहरू चढेर कफर्नहुम पुगे। २५ उहाँलाई समुद्रको पारिपट्टि भेट्टाएपछि तिनीहरूले उहाँलाई सोधे: “रब्बी, तपाईं यहाँ कहिले आउनुभयो?” २६ येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिंदै यसो भन्नुभयो: “तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, चमत्कारहरू देखेकोले तिमीहरूले मलाई खोजेका होइनौ, बरु रोटी खाएर तृप्त भएकोले खोजेका हौ। २७ नाश भएर जाने खानेकुराका लागि होइन तर सधैंभरि रहिरहने र तिमीहरूलाई अनन्त जीवन दिने खानेकुराका लागि परिश्रम गर, जो तिमीहरूलाई मानिसको छोराले दिनेछ, किनकि ऊमाथि बुबा अर्थात्‌ परमेश्वरले समेत अनुमोदनको छाप लगाउनुभएको छ।” २८ त्यसैले तिनीहरूले उहाँलाई भने: “परमेश्वरले स्वीकार्नुहुने कामहरू गर्न हामीले के गर्नुपर्छ?” २९ येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “परमेश्वरले स्वीकार्नुहुने काम यही हो, उहाँले जसलाई पठाउनुभएको छ, ऊमाथि तिमीहरूले विश्वास गर।” ३० त्यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई सोधे: “त्यसोभए, चमत्कार देखाउन तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो देखेर हामी तपाईंमाथि विश्वास गरौं? तपाईं के काम गर्दै हुनुहुन्छ? ३१ हाम्रा पुर्खाहरूले उजाडस्थानमा मन्न खाए; यस्तो लेखिएको छ, ‘खानको लागि उहाँले तिनीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो।’ ” ३२ त्यसकारण, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, मोशाले तिमीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिएनन्‌, तर मेरो बुबाले तिमीहरूलाई स्वर्गबाट साँचो रोटी दिनुहुन्छ। ३३ किनकि जो स्वर्गबाट ओर्लेर आउँछ अनि जसले संसारलाई जीवन दिन्छ, ऊ नै परमेश्वरको रोटी हो।” ३४ त्यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई भने: “प्रभु, यो रोटी हामीलाई सधैं दिनुहोस्।” ३५ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “जीवन दिने रोटी मै हुँ। जो मकहाँ आउँछ, ऊ कहिल्यै भोकाउनेछैन अनि जसले ममाथि विश्वास गर्छ, ऊ कहिल्यै तिर्खाउनेछैन। ३६ तर मैले तिमीहरूलाई भनेको छु, तिमीहरूले मलाई देखेका पनि छौ, तैपनि विश्वास गर्दैनौ। ३७ बुबाले मलाई जो-जो दिनुभएको छ, ऊ मकहाँ आउँछ र जो मकहाँ आउँछ, उसलाई म कुनै हालतमा धपाउनेछैन; ३८ किनकि म आफ्नो होइन तर मलाई पठाउनुहुनेको इच्छा पूरा गर्न स्वर्गबाट ओर्लेर आएको हुँ। ३९ अनि मलाई पठाउनुहुनेको इच्छा यो हो कि उहाँले जो-जो मलाई दिनुभएको छ, तिनीहरूमध्ये एक जना पनि नगुमाऊँ तर उसलाई आखिरी समयमा पुनर्जीवित पारूँ। ४० किनकि मेरो बुबाको इच्छा यही छ कि ज-जसले छोरालाई हेर्छ र ऊमाथि विश्वास गर्छ, उसले अनन्त जीवन पाओस् र म उसलाई आखिरी समयमा पुनर्जीवित पारूँ।” ४१ त्यसकारण यहूदीहरू उहाँको विरुद्धमा गनगन गर्न थाले, किनकि उहाँले यसो भन्नुभएको थियो: “म स्वर्गबाट ओर्लेर आएको रोटी हुँ।” ४२ अनि तिनीहरूले भन्न थाले: “के यो यूसुफको छोरा येशू होइन र? यसको बुबा र आमालाई के हामी चिन्दैनौं र? त्यसोभए अहिले आएर यसले कसरी ‘म स्वर्गबाट ओर्लेर आएको हुँ’ भन्न सक्यो?” ४३ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरू आपसमा गनगनाउन छोड। ४४ मलाई पठाउनुहुने बुबाले नखिचेसम्म कुनै मानिस मकहाँ आउन सक्दैन र म उसलाई आखिरी समयमा पुनर्जीवित पार्नेछु। ४५ भविष्यवक्ताहरूको लेखोटमा लेखिएको छ, ‘अनि तिनीहरू सबै यहोवाबाट सिकाइएका हुनेछन्‌।’ जसले बुबाको कुरा सुन्छ र उहाँबाट सिक्छ, ऊ मकहाँ आउँछ। ४६ मबाहेक अरू कसैले बुबालाई कहिल्यै देखेको छैन। म, जो परमेश्वरबाट आएको हुँ, मैले मात्र उहाँलाई देखेको छु। ४७ तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, जसले विश्वास गर्छ, उसले अनन्त जीवन पाउँछ। ४८ “म जीवन दिने रोटी हुँ। ४९ तिमीहरूका पुर्खाहरूले उजाडस्थानमा मन्न खाए; तैपनि तिनीहरू मरे। ५० स्वर्गबाट ओर्लेर आउने रोटी यही हो र जसले यो खान्छ, ऊ मर्दैन। ५१ स्वर्गबाट ओर्लेर आएको म, जीवन दिने रोटी हुँ। यदि कसैले यो रोटी खान्छ भने ऊ सधैंभरि बाँच्नेछ र मैले दिन लागेको रोटी वास्तवमा मेरो शरीर हो अनि संसारले जीवन पाओस् भनेर म त्यो दिनेछु।” ५२ त्यसकारण यहूदीहरू यसो भन्दै आपसमा बहस गर्न थाले: “यो मानिसले कसरी हामीलाई आफ्नो शरीर खान दिन सक्छ?” ५३ त्यसैले येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, मानिसको छोराको शरीर नखाएसम्म र उसको रगत नपिएसम्म तिमीहरूले जीवन पाउनेछैनौ।* ५४ जसले मेरो शरीर खान्छ र मेरो रगत पिउँछ, उसले अनन्त जीवन पाउँछ अनि म उसलाई आखिरी समयमा पुनर्जीवित पार्नेछु; ५५ किनकि मेरो शरीर साँच्चिकै खानेकुरा र मेरो रगत साँच्चिकै पिउनेकुरा हो। ५६ जसले मेरो शरीर खान्छ र मेरो रगत पिउँछ, ऊ मसित एकतामा रहन्छ अनि म ऊसित एकतामा रहन्छु। ५७ जसरी जीवित बुबाले मलाई पठाउनुभयो अनि बुबाले गर्दा म जीवित छु, त्यसरी नै जसले मेरो शरीर खान्छ, ऊ पनि मैले गर्दा जीवित रहनेछ। ५८ स्वर्गबाट ओर्लेर आउने रोटी यही हो। यो त्यस्तो रोटी होइन, जुन तिमीहरूका पुर्खाहरूले खाए; तैपनि तिनीहरू मरे। जसले यो रोटी खान्छ, ऊ सधैंभरि बाँच्नेछ।” ५९ कफर्नहुममा जनसाधारणसामु सिकाउँदा उहाँले यी कुराहरू भन्नुभएको थियो। ६० त्यसकारण, यो कुरा सुनेपछि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैले यसो भने: “यो कुरा असाध्यै घिनलाग्दो छ; कसले यो सुन्न सक्छ र?” ६१ तर आफ्ना चेलाहरू यसबारे गनगनाउँदैछन्‌ भन्ने चाल पाएर येशूले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: “के यो कुराले तिमीहरूलाई ठेस पुऱ्यायो? ६२ त्यसो हो भने, तिमीहरूले मानिसको छोरालाई पहिला ऊ जहाँ थियो, त्यतै उक्लँदै गरेको देख्यौ भने झनै के होला? ६३ शरीरको केही काम छैन; किनकि जीवन दिने पवित्र शक्ति हो। मैले तिमीहरूलाई पवित्र शक्तिद्वारा यो कुरा भनेको हुँ र यसले जीवन दिन्छ। ६४ तर तिमीहरूमध्ये कोही-कोही यस्ता छौ, जसले विश्वास गर्दैनौ।” किनकि विश्वास नगर्नेहरू को-को हुन्‌ र कसले आफूलाई धोका दिनेछ भनेर येशूलाई पहिल्यैदेखि थाह थियो। ६५ त्यसैले उहाँले अझ यसो भन्नुभयो: “यसैले मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ, बुबाले उसलाई अनुमति नदिएसम्म कोही पनि मकहाँ आउन सक्दैन।” ६६ यो कारणले गर्दा उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरै जना उहाँसित हिंडडुल गर्न छोडे अनि आफूले पहिला छोडेर आएका कुराहरूमा लागे। ६७ त्यसैले आफ्ना बाह्र प्रेषितलाई* येशूले सोध्नुभयो: “तिमीहरू त जान चाहँदैनौ नि, होइन र?” ६८ सिमोन पत्रुसले उहाँलाई जवाफ दिए: “प्रभु, हामी कसकहाँ जाऔं? अनन्त जीवनका वचनहरू त तपाईंसित छन्‌; ६९ अनि परमेश्वरका पवित्र जन तपाईं नै हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका र थाह पाएका छौं।” ७० येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मैले तिमीहरू बाह्र जनालाई छानेको थिएँ, होइन र? तर तिमीहरूमध्ये एक जना निन्दक* हौ।” ७१ वास्तवमा, उहाँले यो कुरा सिमोन इस्करियोतको छोरा यहूदाबारे भनिरहनुभएको थियो, किनकि बाह्र जनामध्ये एक भईकन पनि उसले उहाँलाई धोका दिनेथियो।
^ यूह ६:१ * मत्ती ४:१८ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ यूह ६:७ * दिनार ३.८५ ग्राम तौल भएको चाँदीको रोमी सिक्का हो।
^ यूह ६:१९ * शाब्दिक, “लगभग पच्चीस-तीस स्टेडिया।”
^ यूह ६:५३ * शाब्दिक, “तिमीहरू आफैमा जीवन हुँदैन।”
^ यूह ६:६७ * वा, “पठाइएको जन।” ग्रीकमा “अपोस्टोलोस।”
^ यूह ६:७० * वा, “दियाबल।”